WordPress na MySQL: Gini bu okwu Gi? | Martech Zone
WordPress na MySQL: Gini bu okwu Gi?
Tuesday, August 26, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Enweela ụfọdụ okwu na blọọgụ gbasara nha nke WordPress post. Fọdụ enwusiwo na Nchọgharị Nchọpụta ga-atụle mmetụta nke mbụ x ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụedemede, ebe x amaghị ugbu a. N'ihi ya, ihe ọ bụla nke ọ bụla gasịrị bụ naanị okwu efu.
Foto si Okwu!
Enwere m ike ịmasị na blọgụ m ka m wee mee nyocha ọzọ ma hụ ma ọ bụrụ na mgbasa ozi nke nsonaazụ sitere na nsonaazụ ọchụchọ nwere njikọ ọ bụla na okwu ọnụ. Agaghị m enweta sayensị nke ukwuu, mana achọrọ m ilekwu anya.
Kedụ ka m ga - esi jụọ WordPress maka Okwu agụ?
MySQL enweghị arụ ọrụ okwu ederede na MySQL, mana dịka ọ bụla ajụjụ a na-azaghị, ụfọdụ onye maara ihe na blogosphere amalarị otu esi eji MySQL enweta Okwu Okwu.
Nke a bụ okwu ederede onye edemede gbanwere maka nchekwa data WordPress:
Họrọ ʻID`, `` post_date`, '' post_type`,
SUM (ogologo (`` post_content`) - ogologo oge (Gbanwee (`` post_content, '', '')) + 1) AS 'Wordcount'
SITE `` wp_posts`
INWE `` post_type` = 'post' NA 'post_status` =' bipụta '
Tinye ya site na 'post_date` DESC
OMWU 0, 100
Anaghị mdenye aha na 'nzi ọkwa zuru oke' ebe ọ bụ na ihe na-enye ibu ibu na injin ọchụchọ abụghị nanị ọnụ ọgụgụ, ma ọnụọgụ nke njikọ na ọdịnaya ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere okwu 2,000 nke na-adọta ọtụtụ njikọ njikọ, mgbe ahụ akara aka nri post gi bu okwu 2,000.
Tags: MySQLọnụ ọgụgụ nke okwusqlokwu ọnụWordPressokwu
Google Adsense Ugbu a itinye ego na nri m
Okwu Gị Ọ̀ Ga-agụ Mmetụta Nleta Gị?
Aug 27, 2008 na 2:21 PM
N'ihi ya, ihe ọ bụla nke ọ bụla gasịrị bụ naanị okwu efu.
Ọfọn, ọ bụrụhaala na ị dee maka Google, ọ bụghị ndị na-agụ akwụkwọ gị……
Aug 28, 2008 na 12: 26 AM
Enwere ngwa mgbakwunye akpọrọ "Blog Metrics" nke na - agwa gị nkezi okwu ọnụ maka blọgụ gị wdg. Gini mere ị gaghị anwale ya?
Sep 11, 2011 na 5: 54 AM
M na-ede ruo mgbe m nwetara ihe m kwuru. Echere m na ọ bụ nzuzu na ndị na-azụta ọdịnaya juputara na ọnụ ọgụgụ.
Sep 11, 2011 na 6:28 PM
Casey - Ekwenyere m kpamkpam. Echere m na enwere ohere iji onyogho na isi ihe iji dọta ndị mmadụ ịgụ site na ọdịnaya ahụ, mana m na-ede ruo mgbe m chere na isi ihe a mere… na m na-agba mbọ ime karịa ma ọ bụ na-erughị.